पोखरामा विग्रेको पम्पवाट पेट्रोल विक्री : प्रशासनको मौनता, उपभोक्ता मारमा - Sarangkot NewsSarangkot News
पोखरामा विग्रेको पम्पवाट पेट्रोल विक्री : प्रशासनको मौनता, उपभोक्ता मारमा
11 June, 2019 4:06 am
पेट्रोलियम पदार्थको कारोवारमा एक रुपैयाँको मुल्य तल माथि हुँदा पनि ठूलो अर्थ राख्छ । यसको विक्री कारोवार राज्यले निर्दिष्ट गरेको निति नियमका आधारमा हुने गर्छ तर पनि राज्य संयन्त्र अर्थात् नियमनकारी निकायको आँखा छलेर वा कमजोरीको फाइदा उठाएर केहि पेट्रोल पम्पहरुले उपभोक्तालाई घाटा पार्दै आएको पाइन्छ ।
यस्तै पोखराको एउटा पम्पले विग्रेको मेसिन प्रयोग गरेर पेट्रोल विक्री गर्दै आएको फेला परेको छ । केहि उपभोक्ताहरुले विग्रेको पम्पवाट पेट्रोल विक्री गर्दै आएको गुनासो गरेपछि हामीले पोखरा ११ को रानीपौवा आयल स्टोर्समा निगरानी गर्दा विग्रेको डिजिटल पम्पवाट पेट्रोल विक्री गर्दै रहेको पुष्टि भयो।
रानीपौवा आयल स्टोर्सको उत्तरतर्फको डिजिटल मेसिनमा लिटर मात्र देखाउने तर मुल्य अंक नचल्ने अवस्थाम पनि सोही मेसिन चलाएर पेट्रोल विक्री गर्दै आएको पुष्टि भयो । यसरी उक्त पम्पवाट पेट्रोल विक्री गर्दा प्रति ग्राहक दुई देखि पाँच रुपैयाँसम्म वढी असुल गर्ने गरेको ग्राहकको गुनासोवारे हामी स्वयम् गएर गोप्य निगरानी गर्दा स्पष्ट भयो ।
पेट्रोल पम्पका कर्मचारी सँगै रहेको अर्को सद्धे डिजिटल मेसिनबाट तेल वेच्न सितिमिति नमान्दा रहेछन्। भ्याए सम्म मूल्य नचल्ने विग्रेको मेसिनवाट पेट्रोल हाल्ने र २–३ रुपैयाँ वढी लिने वानी परेकाले दिनभरीमा कति वढी रकम असुल्छन् ? कसले हेर्ने उपभोक्ता ठगिएको ?
उक्त पम्प पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन गण्डकीका अध्यक्ष राजन गोगंजुको हो । अध्यक्षकै पेट्रोल पम्पमा विग्रेको मेसिन चलाएर तेल वेचिने घटनालाई सामान्य कसरी मान्ने ? किन मर्मत गरिएन मेसिन ? पद र पैसावाला पम्प मालिक भएकै कारण नियामक निकायले अनुगमन गर्न खुट्टा कमाएको वुझिन आएको छ । पोखरा महानगरपालिका भित्रै यस्तो धन्दा भइरहँदा पनि किन मौन छ प्रशासन ? दैनिक संयौ ग्राहक मात्र हैन विभिन्न सहकारी कार्यालयले तेल भर्ने रानिपौवा आयल स्टोर्सका संचालक राजन गाेंगजुले मेसिनको रकम उठ्ने मिटर विग्रिएको स्वीकार गरे । उनले पुरानो मेसिन भएकाले वनाउन नमिलेको वताए ।
उनका कर्मचारीहरु यसैलाई प्रयोग गरेर प्रति व्यक्ति वढी पैसा असुल गर्दै आएको सराङकोटले फेला पारेका थियौ । यस वारेमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी युवराज अधिकारी सँग वुझ्दा विग्रेको मेसिन चलाउनु गैह्रकानूनी कार्य हुने वताउँछन् । उनले भने यस वारेमा पम्पमा अनगुमन गरेर विग्रेको मेसिन प्रयोग गरेको पाइएमा कानून वमोजिम कारवाही गरिने छ ।
यो पम्पमात्र होइन पोखरा र आसपासका पेट्रोल पम्पहरुमा गोप्य अनुगमन आवश्यक रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु वताउँछन् । चार लिटर जाने स्कुटरको ट्याङ्कीमा ५ लिटर तेल अटाइदिने उच्च गुणस्तरका मोजल मिटर नाप्न, जाँच्न मिल्छ कि मिल्दैन ? राज्यको ध्यान कहिले जाने र जनताले न्याय पाउने ?